A kpagburu ya, tụọ ya mkpọrọ ma taa ya ahụhụ ma ọ bụ onye ụkọchukwu Katọlik ugbu a | Ahụrụ m Jizọs n'anya
A kpagburu ya, tụọ ya mkpọrọ ma taa ya ahụhụ ma ọ bụ onye ụkọchukwu Katọlik ugbu a
di Paolo Tescione - Jenụwarị 17, 2021
"Ọ dị ịtụnanya na, mgbe ogologo oge gachara," ka Fada Raphael Nguyen na-ekwu, "Chineke ahọpụtala m ka m bụrụ onye ụkọchukwu ijere ya na ndị ọzọ ozi, ọkachasị ahụhụ."
“Ọ dịghị ohu dị ukwuu karịa nna ya ukwu. Ọ bụrụ na ha sogburu m, ha ga-esogbukwa unu ”. (Jọn 15:20)
Fada Raphael Nguyen, 68, ejeela ụkọchukwu na Diocese nke Orange, California kamgbe e chiri ya echichi na 1996. Dị ka Fada Raphael, ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndịda Southern California mụrụ ma zụlite na Vietnam wee bịa United States dịka ndị gbara ọsọ ndụ na usoro ebili mmiri mgbe ọdịda Saigon gachara nye ndị Kọmunist nke North Vietnam na 1975.
Fada Fafael bụ onye Bishọp nke Orange Norman McFarland họpụtara ụkọchukwu mgbe ọ dị afọ iri anọ na anọ, mgbe ọ gbasasịrị mgba dị ogologo na oge na-egbu mgbu. Dị ka ọtụtụ ndị Vietnamese kwabatara na Katọlik, ọ tara ahụhụ site na okwukwe ya n'aka ndị ọchịchị Kọmunist nke Vietnam, nke machibidoro ya iwu na 44. Obi tọrọ ya ụtọ ịbụ onye e mere ụkọchukwu ma nwee ahụ efe iji jee ozi na mba nwere onwe ya.
N'oge a mgbe ọtụtụ ndị na-eto eto America lere socialism / komunizim anya ọma, ọ ga-enye aka ịnụ akaebe nna ha ma cheta nhụjuanya ga-echere America ma ọ bụrụ na usoro ọchịchị Kọmunist abịarute United States.
A mụrụ Nna Raphael na North Vietnam na 1952. Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị afọ mpaghara ahụ nọ n'okpuru ọchịchị gọọmentị France (nke a maara n'oge ahụ "French Indochina"), mana a hapụrụ ya na ndị Japan n'oge Agha IIwa nke Abụọ. Ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Pro-Communist kagburu mgbalị iji weghachi ikike France na mpaghara ahụ, na 1954 ndị Kọmunist weghaara North Vietnam.
Ihe na-erughị 10% nke mba ahụ bụ ndị Katọlik, yana ndị ọgaranya, ndị Katọlik akpagbuo. Dịka ọmụmaatụ, Fada Raphael chetara, etu esi lie ndị a na ndụ ruo olu ha ma werezie ihe eji arụ ọrụ bepụ ha isi. Iji gbanahụ mkpagbu, nwa agbọghọ Raphael na ezinụlọ ya gbagara ebe ndịda.
Na South Vietnam, ha nwere nnwere onwe, ọ bụ ezie na o chetara na agha ahụ malitere n'etiti North na South “emeela ka anyị nwee nchegbu mgbe niile. Anyị enweghị nchebe. “O chetara na m tetara n'ụra elekere anọ nke ụtụtụ mgbe m dị afọ asaa iji fee Mass, omume nke nyeere aka kpalite ọrụ ya. Na 4, ọ banyere na seminarị nke diocese nke Long Xuyen na 7 bụ nnukwu seminarị nke Saigon.
Mgbe ọ nọ na seminarị, ndụ ya nọ n'ihe egwu mgbe niile, ebe mgbọ ndị iro na-agbawa nso ebe ahụ kwa ụbọchị. Ọ na-akụzikarị katkizim ịkụziri ụmụaka ihe ma mee ka ha mikpuo n'okpuru tebụl ahụ mgbe ihe ndị ahụ gbawara nso. Site na 1975, ndị agha America ewepụrụ na Vietnam ma merie nguzo ndịda. Ndị agha North Vietnam weghaara Saigon.
"Obodo ahụ dara", ka o chetara Fada Raphael.
Ndị seminarị ahụ mere ka ọmụmụ ihe ha ngwa ngwa, a manyere nna ahụ ka ọ gụchaa akwụkwọ mmụta okpukpe na nkà ihe ọmụma afọ atọ n'otu afọ. Ọ malitere ihe ekwesịrị ịbụ ọzụzụ afọ abụọ na, na 1978, a ga-ahọpụta ya onye ụkọchukwu.
Otú ọ dị, ndị Communist tinyere ikike siri ike na Churchka ma hapụkwa ka e chie Fada Raphael ma ọ bụ ndị seminarị ibe ya echichi. O kwuru, sị: "Anyị enweghị nnwere onwe ikpe okpukpe na Vietnam!"
N’afọ 1981, e jidere nna ya maka ịkụziri ụmụaka iwu na-akwadoghị ma tụọ ya mkpọrọ ọnwa iri na atọ. N'oge a, a kpọgara nna m n'ogige ọrụ mmanye n'ime ọhịa Vietnamese. A manyere ya ịrụ ọrụ ọtụtụ awa na obere nri ma tie ya ezigbo ihe ma ọ bụrụ na ọ rụchaghị ọrụ e kenyere ya maka ụbọchị ahụ, ma ọ bụ maka obere mmebi iwu.
Fada Raphael na-echeta, sị: “Oge ụfọdụ ana m arụ ọrụ n’akụkụ apịtị nke mmiri rutere n’obi m, osisi ndị tojuru eto na-ekpuchikwa anyanwụ n’elu. Agwọ mmiri na-egbu egbu, ahịhịa na ahịhịa ọhịa bụụrụ ya na ndị mkpọrọ ndị ọzọ ihe egwu.
Mụ nwoke na-arahụ n’ala ụlọ mkpuchi rickety, oke mmadụ karịrị akarị. Okpokoro a dọwara adọwa na-enye ntakịrị nchebe pụọ na mmiri ozuzo. Fada Raphael chetara mmeso obi ọjọọ nke ndị nche ụlọ mkpọrọ ("ha dị ka anụmanụ"), ma were nwute cheta otu otu iti aka n'obi ha siri gbuo otu n'ime ezigbo ndị enyi ya.
E nwere ndị ụkọchukwu abụọ na-eme emume mass ma na-ege ntị na nkwupụta nzuzo. Fada Raphael nyere aka kesaa udo dị nsọ n'aka ndị mkpọrọ Katọlik site na izoro ndị ọbịa ahụ otu mkpọ sịga.
A hapụrụ Fada Raphael na 1986 o kpebiri ịgbanahụ "nnukwu ụlọ mkpọrọ" nke ghọrọ obodo ya nke Vietnam. Ya na ndị enyi ya, ọ nwetere obere ụgbọ mmiri wee gawa Thailand, mana iji ụgbọ mmiri siri ike, injin ya akụ. Iji gbanahụ mmiri mmiri, ha laghachiri n'ụsọ oké osimiri Vietnam, naanị ndị uwe ojii Komunist jidere ha. Fada Raphael tụrụ mkpọrọ ọzọ, oge a na nnukwu ụlọ mkpọrọ obodo ọnwa 14.
N'oge a ndị nche nyere papa m ahụhụ ọhụrụ: ọkụ eletrik. Ọkụ eletrik zigara ya ahụ mgbu dị egwu ma mee ka ọ gafere. Mgbe o tetara, ọ ga-anọ na ahịhịa ndụ nkeji ole na ole, n'amaghị onye ma ọ bụ ebe ọ nọ.
N'agbanyeghị mmekpa ahụ ya, Fada Raphael kọwara oge ịnọ n'ụlọ mkpọrọ dị ka "oke ọnụ ahịa".
"Ekpere m ekpere oge niile wee nwee ezi mmekọrịta mụ na Chineke. Nke a nyeere m aka ikpebi ọrụ m."
Ahụhụ nke ndị mkpọrọ kpalitere ọmịiko n’obi Fada Raphael, onye kpebiri otu ụbọchị ịlaghachi seminarị ahụ.
N’afọ 1987, si n’ụlọ mkpọrọ pụta, ọ nwetara ụgbọ mmiri ọzọ iji gbanahụ nnwere onwe. Ọ dị mita iri atọ na atọ n’ogologo na obosara itoolu ma buru ya na mmadụ iri atọ na atọ, gụnyere ụmụaka.
Ha si n'oké osimiri siri ike gawa Thailand. Ka ha na-aga, ha hụrụ ihe ize ndụ ọhụrụ: ndị ohi mmiri Thai. Ndị Pirates bụ ndị obi tara mmiri na-ewe oge, na-ezu ohi n'ụgbọ mmiri ndị gbara ọsọ ndụ, mgbe ụfọdụ, na-egbu ụmụ nwoke ma dinaa ụmụ nwanyị n'ike. Ozugbo ụgbọ mmiri ndị gbara ọsọ ndụ rutere n'ụsọ oké osimiri Thai, ndị bi na ya ga-enweta nchebe site n'aka ndị uwe ojii Thai, mana n'oké osimiri ha na-enwe obi ebere nke ndị ohi.
Ugboro abụọ Fada Raphael na ndị otu ya na ha gbara ọsọ zutere ndị ohi mgbe chi jiri ma nwee ike ịgbanyụ ọkụ ụgbọ mmiri ahụ gafee ha. Nzukọ nke atọ na nke ikpeazụ mere n'ụbọchị ụgbọ mmiri ahụ nọ na-ahụ Thai. Ebe ndị ohi ụgbọ mmiri ahụ na-agbadata na ha, Fada Raphael, n'isi, tụgharị ụgbọ mmiri ma laghachi n'oké osimiri. Ya na ndị ohi ụgbọ mmiri ahụ na-achụ, ọ banyere ụgbọ mmiri gburugburu nke ihe dịka 100 yad ugboro atọ. Nke a aghụghọ gbochiri ndị mwakpo ahụ na obere ụgbọ mmiri malitere nke ọma na mba.
N’enweghị nsogbu ọ ga-erute na mmiri, e bufere ndị otu ya n’ogige ndị gbara ọsọ ndụ Thai dị na Panatnikhom, na nso Bangkok. Ọ nọrọ ebe ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ. Ndị gbara ọsọ ndụ etinyela akwụkwọ maka mgbapu n'ọtụtụ mba wee chere maka azịza ha. Ka ọ dị ugbu a, ndị bi na ya nwere obere nri, ụlọ obibi dị mkpagide ma machibido ịhapụ ogige ahụ.
“Ọnọdụ ndị ahụ dị egwu,” ka o kwuru. “Obi nkoropụ na nhụsianya adịwo njọ nke na ụfọdụ ndị achọsiela ike. E nwere ihe ruru mmadụ 10 igbu onwe m oge m oge ahụ “.
Fada Raphael mere ihe niile o kwere mee, na-ahazi nzukọ ekpere oge niile na ịrịọ nri maka ndị kachasị mkpa. N’afọ 1989, a kpọfere ya n’ogige ndị gbara ọsọ ndụ dị na Philippines, ebe ọnọdụ ya ka mma.
Ka ọnwa isii gachara, ọ bịara Amerịka. O buru ụzọ bi na Santa Ana, California, wee gụọ sayensị kọmputa na kọleji obodo. Ọ gakwuuru onye ụkọchukwu Vietnam maka nduzi ime mmụọ. O kwuru, sị: "Ekpere m ọtụtụ ekpere ka m mara ụzọ m ga-esi."
N’inwe obi ike na Chukwu na-akpọ ya oku ka ọ bụrụ onye ụkọchukwu, ọ zutere onye ntụzi ọrụ nke dayọsis, Msgr. Daniel Murray. Mazị Murray kwuru, sị: “Ihe ya masịrị m nke ukwuu na nnọgidesi ike ya n'ọrụ ya. Kpa ye mme mfịna emi enye ọkọyọde; ọtụtụ ndị ọzọ gaara enyefe “.
Mgr Murray kwukwara na ndị ụkọchukwu Vietnam ndị ọzọ na ndị seminarị nọ na dayọsis ahụla ahụhụ yiri nke Fada Raphael na ọchịchị Communist nke Vietnam. Dị ka ihe atụ, otu n’ime ndị ụkọchukwu oroma, abụwo prọfesọ seminarị nke papa Raphael na Vietnam.
Fada Raphael banyere Seminary nke St John na Camarillo na 1991. Agbanyeghị na ọ maara ụfọdụ Latin, Greek na French, Bekee bụụrụ ya ọgụ na mgba ịmụ. N’afọ 1996, e chiri ya echichi. Ọ chetara: "Obi dị m ezigbo ụtọ".
Papa m nwere mmasị n'ụlọ ọhụrụ ya na US, ọ bụ ezie na o were oge tupu ọ gbanwee ya. America nwere nnukwu akụnụba na nnwere onwe karịa Vietnam, mana enweghị ọdịnala ọdịnala Vietnamese nke gosipụtara nkwanye ùgwù dị ukwuu nye ndị okenye na ndị ụkọchukwu. O kwuru na omume rụrụ arụ nke America na mercantilism na nsogbu ọ na-enwe na ụmụ ha na-echegbu ndị agadi kwabatara na Vietnam.
Ọ na-eche na usoro ezinụlọ Vietnamese siri ike na nkwanye ùgwù maka ndị nchụàjà na ikike emewo ka ọnụ ọgụgụ ndị ụkọchukwu Vietnamese ghara ịda iwu. Na, na -ekwu ilu mgbe ochie "ọbara nke ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ya, mkpụrụ ndị otu Kraịst," ọ na-eche na mkpagbu ndị Kọmunist na Vietnam, dịka ọ dị na ọnọdụ Churchka na Poland n'okpuru ọchịchị Kọmunist, butere okwukwe siri ike n'etiti ndị Katọlik Vietnamese.
Obi dị ya ụtọ na ọ bụ ụkọchukwu. O kwuru, sị, "Ọ bụ ihe ịtụnanya na, mgbe ogologo oge gachara, Chineke họpụtara m ịbụ ụkọchukwu ga-ejere ya na ndị ọzọ ozi, ọkachasị nhụjuanya ahụ."
San Remo: bishọp na-awakpo Ememme ahụ
Pope Francis na Iraq: nnabata a na-emesapụ aka
The nuncio ndị Apostolic na Iraq na-anwale ihe dị mma maka COVID-19